Building Construction and Infrastructure: Potable Water Pipe Materials ( သောက်သုံးရေ ပိုက်များ )
Potable Water Pipe Materials ( သောက်သုံးရေ ပိုက်များ )
အကြမ်းရေးလက်စ။ ရေးပြီးသွားလျင် ဒီစာကြောင်း ကို ဖယ်ပေးပါမယ်။
ဒီတစ်ပါတ်တော့ သောက်သုံးရေ ဖြန့်ဝေ တဲ့ ပိုက်တွေ အကြောင်း ပြန်ပြီး ဆွေးနွေး ပေးဘို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ သောက်သုံးရေ အတွက် ပိုက်ဆင်ရာ မှာ သုံးတဲ့ ရေနဲ့ ထိမဲ့ ပိုက်ပစ္စည်း တွေ အားလုံး က သောက်သုံးရေ အတွက် သင့်တော်တဲ့ ပိုက် အမျိုးအစား နဲ့ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း တွေ ဖြစ်ရပါမယ်။
Lesson Learnt (အခြား နေရာများ မှ ပေးသော သင်္ခန်းစာ အတွေ့အကြုံများ။)
စကာင်္ပူ PUB က လက်ခံတဲ့ စနစ်။
မြန်မာပြည် က အခြေအနေ။
မြန်မာပြည် အတွက် Material Standards စံချိန်စံညွှန်းများ။
နိုင်ငံတကာ မှာ သောက်သုံးရေ ပိုက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စံတွေ ရှိပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတော်တော် များများ က ရေပိုက်တွေ ရဲ့ စံနှုန်း က မြင့်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ လူတွေ ရဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ၊ မတော်တဆ မှု တွေ ကနေ သင်္ခန်းစာယူ ပြီး စံက မြင့်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာ က တိုးတက် နေဆဲ နိုင်ငံ ဖြစ်စေကာ မူ တိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတွေ က စံ ကို သုံးဘို့ လိုပါတယ်။ (အမှား ကို Lesson Learn from Others သူများဆီက သင်္ခန်းစာ မယူဘဲ ကိုယ်တိုင် အတွေ့အကြုံဆိုး ရတဲ့ အထိ ထပ်စောင့်တာ ကို လက်ရှိအခြေအနေ အရ အကောင်းဆုံး လုပ်ရတာ ပါ လို့ ရောချ လို့ မဖြစ်ပါဘူး။)
စံတွေ ကို စနစ် ထိန်းနိုင်ဘို့ ပိုက် နဲ့ ပိုက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ တိုင်း က အသားတံဆိပ် ရိုက်နှိပ် ထားပေးရပါမယ်။ ထုတ်လုပ်သူ၊ စံ နဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ Class စသည်…. မှီငြမ်းထားတဲ့ စံ မှာ ဘယ်အချက်တွေ ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြ ပေးရမယ် လို့ ပါရင် လည်း ထုတ်လုပ်သူ တွေ လိုက်နာဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ( Ref IPC 303.1)
တပ်ဆင်တဲ့ အပိုင်း မှာ လည်း စံသတ်မှတ် ချက် အတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စံမရှိ ရင် ထုတ်လုပ်သူ ရဲ့ လိုအပ်ချက် ကို လိုက်နာပေးရပါမယ်။
ပိုက်အားလုံး (ပလတ်စတစ် ပိုက် အပါအဝင်) သောက်သုံးရေ အတွက် သင့်တော်ကြောင်း ဓာတ်ခွဲခန်း မှာ စနစ်တကျ စစ်ဆေး အတည်ပြုပြီး သားတွေ ဖြစ်ရပါမယ်။ (သို့) လက်ခံ နိုင်တဲ့ စံ အတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားကြောင်း သမာသမတ် ရှိတဲ့ Third Party Certification ပါရပါမယ်။
ဒီနေရာ မှာ စံချိန်စံညွှန်းတွေ အကြောင်း မဆက်ခင် ရာဇဝင် အချို့ ကို ပြန်လှန်ကြည့်ရင်.
Cast Iron သံပိုက် တွေ က ရာစု နှစ်ပေါင်း များစွာ သုံးခဲ့ ပေမဲ့ ခုအချိန် မှာတော့ မှေးမှိန်သွားပါပြီ။ အဓိက ကတော့ သံချေးစား ပြီး အတွင်းမှာ ဗျုတ်ထ။ ရေထဲ မှာ လည်း သံချေးပါ။ နောက် ဗျုတ်ထတဲ့ အတွက် ရေစီးခုခံအား Pipe Friction လည်း တက်လာတာမို့ Energy လည်း ဆုံးရှုံးရတာ မို့ပါ။
Copper Pipe တွေ ဆိုရင်လည်း အဓိက ကတော့ ပစ္စည်း သန့်ဘို့လိုပါတယ်။ အမှုန် မထွက် ဘို့၊ ခဲ နဲ့ အခြား မသင့်တော်တဲ့ Material တွေ မပါဘို့၊ Dimension မှန်ဘို့ နဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အထူ ရှိဘို့ တွေ လိုအပ်ပါတယ်။
GI ( Galvanized Iron) ပိုက်လည်း ထိုနည်း ၄င်း ပါပဲ။ အရည်အသွေး သိပ်ကောင်းအောင် ထိန်းနိုင်တဲ့ စက်ရုံ က ထွက်တာ ဖြစ်ဘို့ လိုပါတယ်။ အရည်အသွေး မကောင်းရင် ပိုက်အတွင်း မှာ မကြာခင် သံချေး လိုက်လာပါမယ်။ နောက် Galvanizing Material ထဲမှာ ခဲပါရင် သွားပြီ။ ခဲဆိပ်သင့်ပေရော့။ နောက်အောက်မှာ ခံတဲ့ ပိုက်က သံလား၊ သံမဏိလား။ သံဆိုရင် မကြာခင် Galvanized အကာပေါက်ပြီး သံချေးလိုက်ဘို့ ပိုလွယ်ပါတယ်။ Galvanizing လုပ်တယ် ဆိုတာ ကလည်း Zinc & Aluminum ကို အပူပေးအရည်ဖျော်ထားတဲ့ မီးဖိုထဲ နှစ်လိုက် အက်ဆစ်ထဲ နှစ်လိုက် လုပ်ပြီး ရလာတာပါ။ မြန်မာပြည် အနေနဲ့ တော့ အရည်အသွေးကောင်း တဲ့ GI Pipe / Fittings အမြဲတမ်း ရနိုင်ဘို့ အခွင့်အရေး သိပ်ကို နည်းလွန်းသေးတာ မို့ မသုံးသင့်တဲ့ ပိုက်အမျိုးအစား လို့ ပဲ သတ်မှတ် သင့်ပါတယ်။ (စကာင်္ပူ မှာ GI Pipe ကို သောက်သုံးရေ အတွက် သုံးခွင့် မရှိပါ။)
Lead (ခဲ) ကို ကယ်လီဖိုးနီးယား မှာတော့ ချက်ချင်း သေမဲ့ အဆိပ်လို ရွံ့ကြပါတယ်။ လက်ရှိ US မှာ ပိုက်ဆက် ပစ္စည်း တွေ က ခဲ အနည်းဆုံး (သို့) ခဲလုံးဝ သန့်စင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကို ပဲ သုံးခွင့်ရှိပါတယ်။
PVC ဆိုရင်လည်း ရေထဲ ကို အဆိပ်မထွက် အောင် သေချာ လုပ်ထားတဲ့ အမျိုးအစား ဖြစ်ဘို့ နဲ့ လိုအပ်တဲ့ ရေဖိအား ဒါဏ် ကို ကောင်းကောင်း ခံနိုင်တဲ့ ပစ္စည်း ဖြစ်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နေဒါဏ် ( UV attack) ကို လည်း မခံနိုင်ပါဘူး။ ပလတ်စတစ် ပိုက် အမျိုးအစား အားလုံး ဒီအတိုင်းပါပဲ။ Recycle Material ပါလို့ မရပါဘူး။ Corrosion Protection, Back Flow Prevention and Contamination Control, Water Hammer, Cavitation ဒါတွေ က လည်း ဒါတွေ က လည်း စနစ်တကျ သတ်မှတ်ထားတဲ့ IPC လိုကုဒ် မျိုး ကို လိုက်နာဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အပေါ်ယံ ဖြစ်သလို လုပ်ထားတဲ့ သာမန် Plumbing Code နဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ PVC ပိုက်မို့ ခဲစင်တယ် လို့ ယူဆလို့ လည်း မရပါဘူး။ ပီဗီစီ ပိုက်တွေ ကို ဈေးပေါပေါ နဲ့ ပီဗီစီ ထုတ်တဲ့ အခါ Lead Stabilizer လို့ ခေါ်တဲ့ ခဲဓာတ် သုံးခဲ့ရင် ရေရှည်မှာ ရေသုံးစွဲသူ ခဲဆိပ်သင့်ပါမယ်။
အိန္ဒိယ မှာ ပီဗီစီ ပိုက်က နေ ခဲဆိပ်သင့်တဲ့ ပြဿနာ တော်တော် ကြီးပါတယ်။
(ဒီအချက် က လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် စိုးရိမ်စရာ အကောင်းဆုံး အချက်ပါ။ )
မြေအောက်မှာ မြုတ်မဲ့ ပိုက်တွေ အားလုံး က မြုတ်မဲ့ မြေကြီးထဲမှာ ရှိတဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေ နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရေနံ၊ အက်ဆစ် (သို့) အယ်လ်ကာလီ၊ ဆားဓာတ် နဲ့ အခြား Organic Compound အချို့က ပိုက်တွေ ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြုတ်မဲ့ မြေကြီးရဲ့ အခြေအနေ ကို သိဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ( Ref IPC 605)
ဆားနဲ့ ကန့်ဓာတ်များတဲ့ မြေမှာ သတ္ထုပိုက်တွေ ကို ဒီ အတိုင်းမြုတ်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ သတ္ထုပိုက်တွေ မှာ Galvanic Corrosion ကို ကာကွယ်ဘို့ လည်း လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ Solvent နဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာတွေ ရာနှုန်း များတဲ့ နေရာ (သို့) မြေသြဇာ အဆက်မပြတ် ကျွေးနေမဲ့ နေရာမှာ ပီဗီစီ လို ပလတ်စတစ် ပိုက်တွေ သွားမြုတ်လို့ လည်းမရပါဘူး။
နောက်တစ်ခု က မြေအောက်ပိုက် မြုတ်တဲ့ အခါ သတိထားရမဲ့ ပိုက်မြုတ်နည်း စနစ် တွေ ပါ။ ပြီးစလွယ် လုပ်လို့ မရပါဘူး။ Trenching, Bedding & Back Filling Practices, Thrust Blocks and Anchors စတဲ့ လိုအပ်ချက် တွေ က ရေရှည်အတွက် လိုအပ်ချက်တွေ ပါ။ နေရာတကာ ကံရာဇာငယ် လုပ်နေလို့ မဖြစ်ပါ။
အပေါ်မှာ ဖိမဲ့ ဝန်အား ကို လည်း ခံနိုင်မဲ့ အနက်မှာ မြုတ်ရပါမယ်။ (ဥပမာ။ ။ မီးသတ်ကား ရဲ့ ကုန်ပြည့်ဝန် ကို ခံနိုင်ဘို့ အနည်း ဆုံး သုံးပေကျော်မှာ မြုတ်ပေးရပါမယ်။ လိုအပ်ရင် RC Full Haunch လုပ်ပေးရပါမယ်။)
Lead (ခဲ) နဲ့ ပတ်သက်လို့ မှာ IPC မှာ အရင် က 8% အထိ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ခဲပါမှ သတ္ထုပိုက် နဲ့ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း တွေ ကို ပုံသွင်းရ လွယ်ကူလို့ ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကန့်သတ်ချက် ကြောင့် ခဲဆိပ်သင့်တာ ကို သိပ်မလျှော့ချ နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အချက်တွေ ကို တွေ့လာရတာ မို့ ခဲကင်းစင် တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ဘို့ 0.2% အထိလျှော့ချဘို့ လိုအပ်လာပါတယ်။
မြူနီစီပါယ် ပိုင်း မှာ water service piping အနေနဲ့ သောက်သုံးရေ အတွက် သုံးမဲ့ ပိုက် နဲ့ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းတွေ ကို အနိမ့်ဆုံး လက်ခံ မဲ့ ခံနိုင်ရည် ကို IPC မှာ 160 psi ( 1100 kPa) at 73.4ºF ( 23ºC) လို့သတ်မှတ် ထားပါတယ်။ ဒီထက် Water Pressure များရင်တော့ ပိုပြီး ခံနိုင်ရည် ရှိတဲ့ ပိုက်ပစ္စည်း တွေ ကို သုံးရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက် ကို ပလတ်စတစ် ပိုက် တွေ ရွေးတဲ့ အခါ သတိထားရပါမယ်။ IPC-2012 မှာ ပီဗီစီ ပိုက် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြူနီစီပါယ် ပိုင်း မှာ water service piping အနေနဲ့ လက်ခံပေမဲ့ အဆောက်အအုံ ဘက် မှာ သုံးမဲ့ water distribution piping ဘက်မှာ လက်မခံ တဲ့ သဘောတွေ့ရပါတယ်။ ပီဗီစီ ပိုက်တွေ ရဲ့ သဘာဝ အရ ရေပူ ဒါဏ် လုံးဝ မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက် က လည်း အမှားမခံ တဲ့ အချက် မို့ လုံးဝ ကန့်သတ်ထားတဲ့ သဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
IPC က လက်ခံတဲ့ Water Service Pipe Material တွေ က တော့ ABS, Asbestos-Cement, Brass, CPVC, Copper or Copper Alloy Pipe & Tubing, PEX, DICL, Galv. Steel, PE, PP, PVC, SUS 304/ 316 ပါ။ အမျိုးအစား တိုင်း အတွက် စံ သတ်မှတ်ချက် ရှိပါတယ်။ Asbestos-Cement ပိုက်က တော့ ထုတ်လုပ်ဘို့ ခက်သွားပါပြီ။ ဒါကလည်း Asbestos (ကျောက်ဂွမ်း) နဲ့ အဆုပ်ထိခိုက်မှု ဆက်စပ်ချက် တွေ ကြောင့် ကိုင်တွယ် မဲ့ သူ မရှိသလောက် နည်းသွားတာမို့ပါ။
IPC-2012 အရ အဆောက်အဦ အတွက် သုံးမဲ့ Water Distribution Piping ဘက်မှာ PVC နဲ့ ပလတ်စတစ် အမျိုးအစားအချို့ မပါပါဘူး။ သို့သော် IPC-2015 မှာတော့ ဖြည့်ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ သို့သော် PVC ပိုက်တွေ မပါဝင် ပဲ CPVC လို့ ခေါ်တဲ့ ပိုပြီး ခံနိုင်ရည် ကောင်းတဲ့ ပိုက်တွေ ပဲ ပါပါတယ်။
စကာင်္ပူ PUB က လက်ခံတဲ့ အမျိုးအစား။
စလုံး စီပီ-၄၈ မှာတော့ ကြေးပိုက် ဆို ရေပူရေအေးအတွက် သုံးလို့ရတယ်။ သံပိုက် (သို့) Steel ပိုက်တွေ ဆိုရင် အထဲမှာ Lining အကာလွှာ ပါရမယ်။ သံပိုက်တွေ ဆို အပြင်ဘက်က လည်း ကတ္တရာစေးလို အကာအကွယ် ပါရမယ်။ နောက် သတ္ထုပိုက်တွေ ကို Corrosive Ground ထဲမှာ မြုတ်ထားရင် သင့်တော်တဲ့ အကာအကွယ် ပေးရမယ် စသည်ဖြင့်ပါပါတယ်။ Cathodic Protection ဆိုတာ လည်း ပိုက်တွေ ကို ကာကွယ်ဘို့ နည်းပညာ တစ်ခုပါ။
စကာင်္ပူ မှာ ဂျီအိုင် ပိုက် ( Galvanized Pipe) ရိုးရိုး က တရားဝင် သုံးခွင့် မရှိပါ။ သင့်တော်တဲ့ Lining တစ်မျိုးမျိုး ပါမှ သာ လျှင် သုံးခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒီလိုသတ်မှတ် ချက် တွေ နဲ့ တင် မလုံလောက်ပါ။ သောက်သုံးရေ ပိုက်နဲ့ ပိုက်ဆက် ပစ္စည်းအားလုံး က သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံ နဲ့ ကိုက်ညီရပါမယ်။ စစ်ဆေးထားတဲ့ test report or certificate တွေမှာ SAC-SINGLAS ( or) ILAC-MRA partner logo တစ်ခုခု မပါလျင် PUB က လုံးဝ အသိအမှတ် မပြုပါတဲ့။ (သုံးစွဲခွင့် လုံးဝ မရှိပါ။)
ပစ္စည်းတစ်ခု ချင်းရဲ့ စံသတ်မှတ်ချက် Fittings and Standards for Water Service တွေ ကို PUB Website မှာ တရားဝင် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာပြည် မှာ လက်ရှိ အပြာရောင် ပီဗီစီ ပိုက် နဲ့ ဂျီအိုင် ပိုက်တွေ ကို အတော်သုံးစွဲ နေတဲ့ ပုံစံ တွေ့ရပါတယ်။ ရေပိုက်လည်း ပိုက်ပြာ၊ အီးပိုက်လည်း ပိုက်ပြာ၊ မိုးရေလည်း ပိုက်ပြာ မို့ အတော်ခွဲရခက်မယ် လို့ တွေးမိပါတယ်။ စလုံးမှာ ဆိုရင်တော့ မိလ္လာ မြေပေါ်၊ မြေအောက် တစ်မျိုးတစ်ရောင်၊ မိုးရေပိုက် က တစ်ရောင် (ရေပိုက် ကို တော့ မသုံးပါ။)
သိတဲ့ ညီငယ်တွေ ရဲ့ ပြောပြချက် အချို့အရ class 5, class 8.5, class 13.5 ဆိုပြီးရှိပါတယ်တဲ့။ thai standard ( TIS 17- 2532) လို့ ယူဆကြပါတယ်။ Water supply ဆို cl 13.5 Sanitary and Drain ဆို class 8.5 သုံးလိုက်တာပဲ လို့ ရှင်းပြပါတယ်။ အရင် ယိုးဒယား က သွင်းလေ့ရှိပြီး အခု တော့ ပြည်တွင်း မှာတင် ထုတ်နေကြပြီ လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီပိုက်ပြာ တွေ ကို သောက်သုံးရေ ပိုက်အနေ နဲ့ သုံးတဲ့ အခါ စိုးရိမ်မှု အချို့ ရှိပါတယ်။ ပထမ တစ်ခု ကတော့ သောက်သုံးရေ အတွက် သင့်တော်မှု ရှိ၊ မရှိ။ ကုန်ကြမ်း နဲ့ ထုတ်လုပ်မှု အဆင့်ဆင့် မှာ ဘယ်လောက်သန့် သလဲ ဆိုတဲ့ အချက် နဲ့ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်ကောင်း သက်ဆိုင်ပါလ်ိမ့်မယ်။
PVC ပိုက်မို့ ခဲစင်တယ် လို့ ယူဆလို့ လည်း မရပါဘူး။ အိန္ဒိယ မှာ ပီဗီစီ ပိုက်က နေ ခဲဆိပ်သင့်တဲ့ ပြဿနာ တော်တော် ကြီးပါတယ်။ (ဒီအချက် က လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် စိုးရိမ်စရာ အကောင်းဆုံး အချက်ပါ။)
ဒုတိယ အချက် က တော့ ပိုက်ဆင်တဲ့ အခါ ခံနိုင်ရည် နဲ့ မဆင်သင့်တဲ့ နေရာတွေပါ။ မြေအောက်မှာ Solvent, ဒီဇယ် (သို့) ဓာတ်မြေသြဇာ သုံးမဲ့ နေရာတွေ မှာ မသုံးသင့်ပါဘူး။ မြေအောက်ပိုက် ဆင်တဲ့ အခါ လိုက်နာရမဲ့ စံတွေ ကို လိုက်နာမှု နည်းပါးတာ လည်း စိုးရိမ်စရာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရေပန့် ( Water Pump) အထွက်မှာ တတ်ရင် Head နည်းပေမဲ့ Surge ( Water Hammer) ကြောင့် Fittings/ Elbow မှာ ကွဲထွက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေပန့်နဲ့ ပေးရတဲ့ နေရာ မှာ သုံးလို့ မရပါဘူး။ Gravity Feed ဆိုရင်တောင် မှ Sudden Closure ရုတ်တရက် အပိတ်မြန်တဲ့ Solenoid သုံး ပစ္စည်း (သို့) Flush Valve တွေ များတဲ့ နေရာ မှာ လည်း Surge ကြောင့်ကွဲပါမယ်။ မလေးရှား နာမည်ကြီး ဟိုတယ် တစ်ခု မှာ Laundry Equipment တွေကို Gravity Feed နဲ့ ပေးတဲ့ Copper Pipe အထူကြီးတွေ ကွဲထွက်တာ ကိုယ်တိုင် ကြုံဘူးပါတယ်။
နောက် နေထိမဲ့ နေရာမှာ လည်း သုံးလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ PVC က UV Attack ခံနိုင်ရည် မရှိပါ။
ပြန်ကျိုထားတဲ့ recycled pvc သုံးလို့ မရသလို ရေဆိုး မိလ္လာ အတွက် လို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ ပိုက်အမျိုးအစား ကို လည်း သောက်သုံးရေ အတွက် သုံးလို့ မဖြစ်ပါဘူး။
ပီဗီစီ ရေဆိုး မိလ္လာပိုက် ကျတော့ လည်း သောက်သုံးရေ ပိုက် Fittings တွေ ချိုးထားတဲ့ ပုံ မတူပါ။ အမေရိက မှာတော့ Soil Waste and Vent Pattern ( ASTM D 3311, drain, waste, and vent patterns) လို့ခေါ်ပါတယ်။ စကာင်္ပူ မှာ လည်း ဒီလို သတ်မှတ်ချက် ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ အများသုံးနေတဲ့ ပိုက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် သင့်တော်မှု ရှိ၊ မရှိ တကယ် စစ်ဆေးသင့် နေပြီ လို့ ထင်ပါတယ်။ နောက်မှ အိန္ဒိယ လို နောင်တ ဆိုး မရစေချင်ပါ။
ကုန်ကျ စားရိတ် ပိုများ လာမယ် ဆိုပြီး ကန်ထရိုက်တာ တွေ ငြီးကောင်း ငြီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ အိမ်ဈေး၊ အဆောက်အဦ ဈေးတွေ က လည်း ငါးပြား၊ တစ်ပဲ မဟုတ်ပါ။ အရည်အသွေး ရှိတဲ့ ပိုက် စနစ် တွေ ရသင့်တဲ့ တန်ဘိုးတွေ ဖြစ်တာ အငြင်းပွားဖွယ် မဟုတ်တာ တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာပြည် မှာ လည်း Material Quality ကိုထိန်းဘို့ စံသတ်မှတ် ပေးမဲ့ National Standard Council လိုအဖွဲ့မျိုး စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်း ထားဘို့ လိုအပ် နေတဲ့ သဘောတွေ့ရပါတယ်။ စကာင်္ပူ မှာ လုပ်တဲ့ စနစ် လို နိုင်ငံ တကာ စံ အဖွဲ့တွေ နဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ရှိဘို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်းအရည်အသွေး ကို စံနဲ့ ညီမညီ စစ်ဆေးပေးမဲ့ Accredited Laboratory တွေလည်း ရှိဘို့ လိုအပ်ပါမယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်တွေ မှာ ပေါင်းထားပေးရင် တော့ မျိုးဆက်သစ် တွေ လည်း ပညာရပါလိမ့်မယ်။ Certified Lab Technicians တွေ နဲ့ ပညာရှင် ဆန်ဘို့ တော့ အရေးကြီးပါတယ်။
စကားမစပ်၊ Middle East Project တစ်ခု မှာ ဂန္ဓာလရာဇ် ပြည်က Stainless Steel Pipes တွေ သုံးတာ တစ်နှစ်အတွင်း သံချေး တက် လာလို့ တစ်ဆိုဒ် လုံး ပြန်လဲဘို့လိုတဲ့ အဖြစ် ကို ဌာနတွင်း ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခု က နေ ကြားရပါသေးတယ်။ (တရုတ်နိုင်ငံ မှာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ပစ္စည်း တွေ ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ တပြိုင်တည်းမှာ ပဲ အဆင့်အတန်း မမီတဲ့ ပစ္စည်းတွေ လည်း ရှိနေအုံးမှာပါ။ အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော။ ၉၀% သန့်တဲ့ အချိန်မှာ မသန့်တဲ့ ၁၀% က ဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးနိုင်တာမို့၊ တရုတ်နိုင်ငံထွက် ပစ္စည်းတွေ ကို QC သေချာစစ်နိုင်မှ သုံးခွင့်ပေးရပါမယ်။)
ဒီနေရာ မှာ ပို့လွှတ်မဲ့ ရေရဲ့ အရည်အသွေး က လည်း အရေးပါပါတယ်။ မသန့်တဲ့ (သို့) အက်ဆစ်ဓာတ် လို ဓာတ်ပြုလွယ်၊ တိုက်စားလွယ် တဲ့ အရည်အသွေး ဆိုရင် ပိုက်တွေ ကို စားပါမယ်။ Copper Pipe တောင် Blue Water လို့ခေါ်တဲ့ ကြေးညှိတွေ ပါပြီး ကြေးဆိပ်သင့်နိုင်ပါတယ်။ Hardness များရင်တော့ ပိုက်တွေ ချိုးကပ်ပြီး ပိတ်လာဘို့ အလားအလာ ရှိပါတယ်။
Download PDF Copy: W057_R01 Potable Water Pipe Materials
[ http://publicecodes.cyberregs.com/icod/ipc/2012/index.htm ]
PUB Approved Water Fittings
[ https://app.pub.gov.sg/WaterFittingsUsers2/WaterWsFittingStd.aspx ]
[ http://www.pub.gov.sg/general/Pages/Hanbook.aspx ]
[ http://www.pub.gov.sg/general/Documents/RPUB00003.pdf ]
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 8:02 PM